Himoonni fi faankshinoonni armaan gadii jijjiiramtoota walii dalaguuf.Jijjiiramtoota ibsuuf ykn qindeessuuf,jijjiiramtoota gosa tokkorraa gara birootti geeddaruuf,ykn gosa jijjiiramaa murteessuuf faankshinoota kana fayyadamuu dandeessa.
Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo mahaallaqaatti geeddari.Qubannaan gitoo biyyaa addaan baasaa kurnayee fi mallattoo mahaallaqaaf fayyade.
Himannoo diraa ykn himannoo lakkofsaa gara himannoo Buuliyaaniitti geeddari,ykn himannoo lakkofsa baaqqee gara Buuliyaaniitti geeddari.
Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu gatii guuyyaatti geeddari.
Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo kurniyeetti geeddari.
himannoo lakkoofsaa ykn himannoo diraa kamuu gara gosa dachaatti geeddari.
Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu itergaatti geeddari.
Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu itergaa dheeratti geeddari.
Diraa akka seranaatti qindeessi.
Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu gosa deetaa baaqqetti jijjiira.
Himannoo lakkoofsa kamuu gara himannoo diraatti jijjiira.
Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo addaba'aatti geeddari.
Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo addaba'aa gosa xixiqqaa"Error" tti geeddari.
Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefBool akaakuu deetaa durtii jijjiiramtootaf qindeessa,akkaataa hangii qubeen.
Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefCur akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.
Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefDate akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.
yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,akkaataa hangii qubeetiin, akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessi.
Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefErr akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.
Yoo arfiin akaakuu labsii ykn jefuraa hin ifteeffamne,himni DefSng akaakuu jijjiiramaa durtii qindeessa,akkaataa hangii qubeen.
Jijjiiramaa ykn waraantoo labsuu.
Waraantoo keessatti, dirree deetaa ta'uu jijjiiramaa murteessa.
Yoo himatni lakkoofsaa ykn diraa gara jijjiiramaa Guyyaatti jijjiiramuu ni danda'a ta'e basdaada.
Gatii duwwaa qabaachuu jijjiiramaa jijjiiramuu basdaada. Gatii duwwaan, jalqabsiifamuu dhabuu jijjiiramaa agarsiisa.
Yoo jijjiiramaan gatii dogoggoraa qabaate basdaada.
Yoo jijjiiramaan gatii addaa Null qabaate,jijjiiramaan kan deetaa hin qabne ta'uu isaa agarsiisudhaan, basdaada.
Lakkoofsa ta'uu himataa basdaada. Yoo himatni lakkoofsa ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; yoo ta'uu baate ammoo soba deebisa.
Wanta OLE ta'uu jijjiiramaa wantaa qorata. Yoo jijjiiramichi OLE wantaa ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; ta'uu baannan soba deebisa.
Daangaa waraantoo gara gad aanaa deebisa.
Daangaa waraantoo gara ol aanaa deebisa.
Jijjiramaaf gatii isaa ramada.
Akaakuujijjiiramaa dirree deetaa wajjin deebisa.
Waraantoo jijjiiramaa deebisa.
Qabiyyeewwan miseensota waraantoo gosa waraantoo hammamtaa dhaabbataa haquu ,fi kuufamoo gosa waraantoo hammamtaa jijjiramaan qabame gadlakkisiisuuf tajaajila.
0 ykn 1 akka durtii daangaa waraantoo isa gad-aanaatti hiika.
Jijjiiramaan marti, lakkadda sagantaa keessatti, Haala ifa ta'een hima Dim wajjin akka lallabaman hubachiisa.
Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa moojuliitti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.
Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa hundataatti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.
Jijjiiramaa ykn waraantoo, karqurxaa ykn faankishinii keessatti, bakka adeemsaatti lallaba. Kanaaf, gatiin jijjiiramaa ykn waraantoo erga karqurxa ykn faankishinii gaddhiifamee jiraatu ni hambifama. Jijjiirraan hima Dim ni danda'ama.
Diraa(TypeName) ykn gatii lakkoofsaa(VarType) kan odeeffannoo jijjiiramaa qabu deebisa.
Jijjiiramaa ykn amala irratti wabii wantaa qindeessa.
Wanti yeroo sa'aa darbee maqaa wantaatiin akka ulaagaa diraatti akka raawwatamu dandeessisa.
Wantootni maqaa wantaatti fayyadamuudhaan akka ulaagaa diraatti yeroo sa'aa darbee akka raawwatamu taasisa.
Ulaagaalee kanneen gara faankishiniitti akka dirqaatti dabarfaman akka hiiktu siif eeyyama.
Faankishiniinichi ulaagaa dirqaaleetiin waamamuu isaa qorata.
Yoo wantootni Basic Uno ibsaman lamaan, gatii wanta Uno tokko bakka bu'an, dhugaatu deebi'a.
Title is: Jijjiiramtoota